Khiyaamada ugu fiican ee looga faa'iideysan karo Safari ee ku saabsan IOS (II) | Wararka IPhone
Waxaan sii wadaynaa khiyaanooyinkeena cajiibka ah shalay. Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dufcad kale oo wanagsan oo Safari ka kooban iOS, adigoo raacaya kii aan shalay kuu soo bandhignay (ha moogaanin iyaga), taas oo noo oggolaan doonta inaan horumarinno waayo-aragnimadeena marin-u-helka sida ugu macquulsan. Apple si aad ah looma siinayo casharrada, dhab ahaantii waxaa jira shaqooyin ku jira macruufka oo in badan oo ka mid ahi aysan ka warqabin illaa dhowr nooc ka dib, markaa waxaan dooneynaa inaan ku barinno dhammaan sirta Safari ee macruufka, oo ah biraawsarka ugu isticmaalka badan ee nidaamkan qalliinka sababo iska cad. . Aynu horay u sii socono ka dibna liis kale oo wanaagsan oo khiyaanooyin iyo tuuryo u ah Safari oo ku saabsan iPhone ama iPad-kaaga Ha moogaanin iyaga, hana iloobin in aad iskaashi la sameyso haddii aad taqaanno toobiyeyaal badan oo aan lagu darin.
1 Bogagga ICloud / Handoff
2 Si dhakhso ah ugu rog bilowga
3 Xaddid / u oggolow boggaga internetka qaarkood
4 La wadaag bog adoo isticmaalaya AirDrop
5 Nadiifi taariikhda biraawsarka iyo keydka
Bogagga ICloud / Handoff
Sida inbadan oo idinka mid ahi ogyihiin, mahadsanid daruuraha iyo isku xidhka ka dhexeeya aaladaha kala duwan ee iOS / macOS, waxaan daalacan karnaa bog ka mid ah iPhonekeena si aan hadhow u sii wadno tusaale ahaan iPad-kayga. Haddii aad rabto inaad gasho bogaggan aan uga tagnay iyagoo furan qalabkeenna kale sWaxaan kaliya u baahanahay inaan tagno menu-ka daaqadaha badan ee Safari. Marka daaqadaha furan oo dhan la muujiyo, waxaan ku soo rogi doonnaa waxyaabaha ku jira kor u qaadista, taas oo ah, waxaan aadi doonnaa salka shaashada Hoos ayaan arki doonaa "Xxxxx iPhone / iPad / Mac", oo waxaan si dhakhso leh u sii wadi karnaa daalacashada bogagga shabakadda ee ka furan qalabkeenna kale.
Si dhakhso ah ugu rog bilowga
Waxaa jira bogag aad u dheer, gaar ahaan kuwa ay ka mid yihiin waxa loogu yeero "duudduub aan dhammaad lahayn", taas oo ah, waxaan ku dhex socon doonnaa degel websaydh ah si fudud annaga oo hoos u dhigeyna, laakiin boggu weligiis ma joojinayo rarkiisa, markaa uma baahnin inaan riixno xiriiriyeyaal ama bogagga la beddelay. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadu waxay timaaddaa markay tahay inaan dib ugu noqonno xagga sare. IOS iyo Safari waxay leeyihiin nidaam «back to top«, Taas oo noo oggolaan doonta inaan dib ugu laabanno bilowgii hal taabasho oo keliya. Si tan loo sameeyo, waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan ku sameyno saxaafad gaaban saacadda baarka kore. Tani waxay ka shaqeyn doontaa labadaba Safari iyo codsi kasta oo kale. Anigu shakhsi ahaan waxaan ahay ikhtiyaarka ah in aan aad u xiisay markaan isticmaalayo nidaam kale oo mobiil ku shaqeeya.
Xaddid / u oggolow boggaga internetka qaarkood
Waa hawl fantastik ah, gaar ahaan kuwa doonaya inay ka faa'iideystaan ​​xakameynta waalidka oo ay ku xaddidaan carruurtooda hadba websaydhyada. Tan waxaan ku mari doonnaa macruufka Dejinta, qaybta guud waxaan ka heli doonnaa qayb la yiraahdo «Xaddidaadaha«. Marka aan dhaqaajinno xayiraadaha, waxaan u dhaqaaqi doonnaa halka aan ku xannibayo xaddidaadda shabakadda. Waxaan sidoo kale u hawlgalnaa shaqadan si aan u awoodno inaan ka gudubno nooca xannibaadda ah ee aan dooneyno, waxaan leenahay: Xannibidda bogagga internetka qaarkood; Xaddid mawduucyada dadka waaweyn; Kaliya shabakado gaar ah. Sidan ayaan ugu habeyn karnaa sida aan jecel nahay waxaana ka hortageynaa kan ugu yar guriga inuu daalacdo websaydhado aan habboonayn. Tani waa inaad haysataa lambarka amniga oo shaqeynaya, kuma shaqeyn doono Aqoonsiga Taabashada.
La wadaag bog adoo isticmaalaya AirDrop
Markale AirDrop ayaa nolosheena badbaadisa. Thanks to adeeggan Bluetooth oo la jaan qaadaya dhammaan aaladaha Apple waxaan si dhakhso leh ula wadaagi karnaa bog. Si loo wadaago degel iyada oo loo marayo AirDrop waxaan raaci doonnaa isla tallaabooyinka sida loo wadaago feyl kasta iyada oo loo marayo shaqadan. Waxaan gujin doonnaa badhanka saamiga, xagga sarena waxaan ku haysan doonnaa aaladaha laga helo AirDrop. Waxaan xasuusnaano in AirDrop ay si sax ah u shaqeyso waa inaan ku shaqeynaa Bluetooth. Ma fududaan karin, ka faa'iideyso AirDrop, oo aad u dhakhso badan.
Nadiifi taariikhda biraawsarka iyo keydka
Mararka qaarkood, gaar ahaan haddii aan nahay dad si adag u isticmaala Safari, barowsarku wuxuu sababi karaa shilal sababtoo ah isku soo ururinta buskudka, keydka iyo xogta bogagga. Dhanka kale, waxaa laga yaabaa inaan dooneyno inaan tirtirno taariikhda Safari kaliya madadaalo, waana wax fudud. Waxaan aadi doonnaa macruufka Dejinta (iOS Settings), markii aan gudaha gashana, waxaan raadin doonaa goobaha gaarka ah ee Safari. Mid ka mid ah shaqooyinka ku dhex jira liiska Safari waa «Nadiifi taariikhda iyo xogta boggaga internetka«. Riixitaanka ayaa nadiifin doona kaydinta iyo xogta bogga. Badiyaa way fiicantahay in tan la sameeyo si waxyar loo hagaajiyo waxqabadka Safari.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Khiyaamada ugufiican ee looga faa iidaysto Safari macruufka (2/2)
Shan shay oo Android ah ayaan jeclaan lahaa inaan ku helo iOS
Tan waxaan horey u soo maray: helitaanka xaddidan ee iPhone 7 markii la bilaabay sababo la xiriira dhibaatooyinka soo saarista